January 2019 | Save A tareenka
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Safraya Europe on miisaaniyad waa caqabad! Si kastaba ha ahaatee, waxaa macquul ah inta aad sameeyo cilmi-baaris si loo diyaariyo safarkaaga si caqli ah. Waxaa aad la yaab yaabaa in inta aad ku badbaadin karto by qaadashada hab saxda ah ee gaadiidka ama dooranaya dalal ka jaban. Trust…
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Aynu u qaadanno inaad go'aansatay inaad booqato Yurub labada bilood ee soo socda. Waxaa laga yaabaa in adiga iyo saaxiibadaa qorsheeyo fasax hor jeeda college. Waxaa laga yaabaa in, aad rabto in aad qaadato qoyska fasax dheer. Well, idinku waxaad ka dhigteen go'aanka saxda ah….
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo makhaayad Yurub guide Michelinguiden Best bixisaa bilowga weyn oo qorsheyneysa safar tareen Yurub a. Hagaha Michelin wuxuu hadda siiyaa socdaalayaasha Yurub xulasho maqaaxiyo iyo hoteello ku yaal 38 magaalooyinka Yurub. Saddex magaalo cusub ayaa lagu daray in this 2019 edition: Zagreb…
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Yurub qaarad ahaan waa mid aad u kala duwan, Europe waxay bixisaa wax nooc kasta oo ka mid ah socotada - qaniinyada delicious ka mid ah. Laakiin halka ay ku hari dhadhan loo farxay doonaa ugu? What meal pic will have your Instagram racking up 100’s of likes? Jooji yaabban iyo bilaabaan munching….
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Qof walba oo daawaynaya safraya duwan. Qaar ka mid ah raaxaysan waayo-aragnimo ka timaada safraya halka on dhamaadka kale qaar ka mid ah oo kaliya u safri ay sabab u tahay cadaadiska delegan ama cadaadis qoyska. Sabab kasta marka ay timaado u safraya, again there are different ways of how people like to plan…
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo cayaaray dawacooyin, gisi, oo duulaya doofaarro. Haa, Doofaaro! Dabaal The Year of Doofaar ka, Dabaal Chinese sanadka cusub ee Europe! Chinese sanadka cusub, sidoo kale loo yaqaan Festival Spring ama Year New Lunar, waa dhacdo ugu muhiimsan ee kalandarka Chinese. It’s a special…